Kpọtụrụ - Ụlọ ahịa eGay
Egay ahịa Nzuzo Nzuzo
Nzuzo Nzuzo a na-akọwa otua esi achota ozi nkeonwe gi, jiri ya, ma keta mgbe i gara ma obu bu ahia site na egay.shop ("Site").
Ozi Nkeonwe Anyị Na-anakọta
Kedu ka anyị si eji ozi nkeonwe gị?
Ịkekọrịta Ozi Nkeonwe gị
Mgbasa ozi Behavioral
Maka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo anyị, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme mkpesa, biko kpọtụrụ anyị site na ịpị EBE A.
Achọrọ ndụmọdụ ụfọdụ? Ajụjụ banyere usoro gị? Chọrọ ka gị na ya bụrụ enyi? Zitere anyị ozi anyị ga-aza gị ozugbo i kwere mee!
aha email Message
Site na ịlele igbe a ma nyefee mpempe akwụkwọ a, ekwetara m na m ga-eji data nkeonwe m kpọtụrụ m ọzọ na ihe m rịọrọ nke a gosiri na ụdị a. Ọ dịghị ọgwụgwọ ọ bụla a ga-eme na ozi m. Ịmara ma gosipụta ikike gị, tinyere iwepụ nkwenye gị na iji data anakọtara site n'ụdị a, biko kpọtụrụ anyị amụma nzuzo
Lelee ikpe n'elu